Lisitra feno momba ny lesoka noho ny kolikoly fisie MS Excel
Home Products DataNumen Excel Repair Lisitry ny hadisoana feno
Lisitra feno momba ny lesoka noho ny kolikoly ataon'ny Microsoft Excel
Rehefa mampiasa Microsoft Excel ianao hanokatra rakitra xls xlsx na xlsx maloto dia hahita hafatra mandiso isan-karazany ianao, izay mety somary manakorontana anao ihany. Noho izany, eto izahay dia hiezaka ny hanao lisitra ny lesoka rehetra mety, voalahatra arakaraka ny fahita matetika. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana fanarenana Excel anay DataNumen Excel Repair manamboatra ilay rakitra Excel maloto. Ireto ambany ireto dia hampiasa 'filename.xlsx' izahay hanehoana ny anaran'ny fisie Excel maloto.
Tsy afaka manokatra ny fisie 'filename.xlsx' i Excel satria tsy mety ny endrika fisie ho an'ny fanitarana. Hamarino fa tsy simba ilay rakitra ary mifanaraka amin'ny endrika fisie ilay fanitarana. (Hadisoana 101590)
Excel tsy afaka manokatra ity rakitra ity. Ny endrika fisie na ny fanitarana rakitra dia tsy mitombina. Hamarino fa tsy simba ilay rakitra ary mifanaraka amin'ny endrika fisie ilay fanitarana.
Kolikoly ilay rakitra ary tsy azo sokafana.
Ity rakitra ity dia tsy anaty endrika azo fantarina.
Ny rakitra Excel dia tsy ao anaty endrika azo fantarina.
Excel dia nahita atiny tsy voavaky tao .
Tsy niasa intsony ny Microsoft Excel.
Tsy nahavita nanokatra fisie ilay mpanova.
Ny mpanova ilaina hanokatra ity rakitra ity dia tsy ho hita.
Nahita olana tamin'ny atiny sasantsasany tao amin'ny 'filename.xlsx' izahay. Tianareo ve izahay hiezaka ny ho sitrana araka izay tratranay? Raha matoky ny loharanon'ity boky fiasa ity ianao, kitiho ny Eny.
Miala tsiny fa tsy nahita filename.xlsx izahay. Azo atao ve ny namindra azy io, nanova ny anarany na voafafa?